काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडलाई कैलाश विकास बैंक लिमीटेड प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले अनुमति दिएको छ । प्राइमले कैलाश बैंकलाई १००ः९४ हाराहारीको सेयर स्वाप रेसियोमा गाभ्ने गरी असोज १५ गते प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यी दुवै बैंकको पुस २५ गते सम्पन्न साधारणसभाले आपसमा गाभ्ने गाभिने...
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्स लिमीटेडलाई प्राप्ति(अक्वायर) गर्ने भएको छ । बैंक र सिर्जना फाइनान्सबीच गाभ्ने/गाभिने विषयमा बुधबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्न विषेशज्ञलाई तत्काल नियुक्त गरी सोको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संयुक्त समितिमा छलफल गरी समितिले...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने गरी अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। पुस २८ गते बैंकको मुख्यालय नारायणहिटीपथमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकका संचालक तथा मर्जर तथा प्रापित समितिका संयोजक प्रवलजंग पाण्डे र सहयोगी विकास बैंक लिमीटेडका तर्फबाट संचालक तथा मर्जर र प्राप्ति...
कालिका र जनसेवीबीचको मर्जर निश्कर्षउन्मुख, एकीकृत कारोबारका लागि राष्ट्रबैंकको अन्तिम स्वीकृत
काठमाण्डौ । स्याङ्जाको वालिङ स्थित कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र पर्वतको कुश्मा स्थित जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकमा बुझाएको अन्तिम सम्झौतामा अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई गाभे पश्चात...
प्राइमले कैलाशलाई गाभ्ने पक्का, अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले कैलाश विकास बैंक लिमीटेडलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्राइम बैंकको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठ र कैलाश विकास बैंकको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलले एक समारोहका बीच हस्ताक्षर...
मेगाले गण्डकीलाई १ः१ को सेयर स्वापमा गाभ्ने गोप्य समझदारी !
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने बुधबार समझदारी भएको छ । मेगा बैंकले विगतमा केही वाणिज्य बैंकहरुसँग मर्जरमा जाने प्रयास गरेको थियो । मर्जरकै लागि यो बैंकले आधादर्जन वाणिज्य बैंकसँग लामो समयसम्म छलफल चलायो । तर, सो क्रममा कुरा मिल्ने अवस्था नदेखिएपछि यो बैंकको संचालक समितिले मर्जर...
काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेडले राष्ट्रिय स्तरको गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । मेगा बैंकको राजधानीमा अवस्थित हेडक्वार्टरमा केहीबेरअघि दुई बैंकका अध्यक्षबीच प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मेगा बैंक लिमीटेडका संचालक समिति अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले राष्ट्रिय स्तरको गण्डकी विकास बैंकलाई मेगाले...
ग्लोबल आइएमईद्वारा हाथवेलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ति(एक्विजिशन) गरी बुधबारदेखि एकिकृत वित्तीय कारोबार सुरु गरेको छ । धरानमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले एकिकृत वित्तीय कारोबारको औपचारिक शुभारम्भ गरिन् । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर भण्डारीले बैंकहरु...
साधनाले ‘आर्थिक समृद्धि’लाई १००ः८० को सेयर अनुपातमा प्राप्ति गर्ने, १००% हकप्रद पनि आउने
काठमाण्डौ । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्तलाई १००: ८० को सेयर स्वाप अनुपातमा गाभ्ने(प्राप्ति गर्ने) भएको छ । दुवै वित्तीय संस्थाबीच प्राप्तिको सम्झौतापछि भएको सम्पत्ति तथा दायीत्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा साधनाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्तलाई १००: ८० को सेयर अनुपातमा गाभ्ने अजेण्डा विशेष साधारणसभाबाट...
प्राइमले 'तीनजिल्ले' कन्काई बैंकलाई १००ः६८ को सेयर स्वाप अनुपातमा प्राप्ति गर्ने
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले झापाको दमकमा मुख्य कार्यालय रहेको तीन जिल्ले कन्काई विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको ८ महिना लामो मर्जर प्रक्रिया सफल नभएपछि उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा रहेको प्राइमले दमक ६ थानारोड, झापामा मुख्य कार्यालय रहेको कन्काईसँग गाभ्ने गाभिने सम्झौता...
इन्भेष्टमेन्ट बैंक र जेविल्स फाइनान्सद्वारा एकैदिन विशेष साधारणसभा आह्वान, के के छन् अजेण्डा ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई १०० बराबर ३३ कित्ताको सेयर स्वाप अनुपातमा प्राप्ति गर्न लागेको हो । यसको अर्थ जेविल्स फाइनान्सको १०० कित्ता सेयर हुनेहरुले इन्भेष्टमेन्टमा गाभिएपछि ३३ कित्ता सेयर पाउनेछन् । डिडिएले तय गरेको...
देव विकास बैंकले वेस्टर्नलाई १ः१ को अनुपातमा गाभ्ने, दुवै बैंकद्वारा एजीएम आह्वान
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक देवः विकास बैंके तीन जिल्ले विकास बैंक वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडलाई १ बराबर १ को सेयर स्वाप अनुपातमा प्राप्ति(एक्वीजिसन) गर्ने भएको छ । देवः विकास बैंकको तुलनामा वेस्टर्नको खराब कर्जा न्यून रहेको र कस्ट अफ फण्ड पनि थोरै रहेको डिडिएको क्रममा देखिएको छ । दुई बैंकको डिडिए रिपोर्टका...